» कोरोनापछि हन्ता ?
कोरोनापछि हन्ता ?
कोरोना भाइरसको त्रासले विश्वलाई सताइरहेका बेला फेरि अर्को भाइरसले चीनको युन्नानमा एकजनाको मृत्यु भएको खबर फैलिएपछि विश्वका जनता थप तनावमा परेका छन् । अमेरिकामा ‘न्यू वर्ल्ड’ को नाउँले चिनिएको हन्ता भाइरसले ती चिनियाँको निधन भएको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ । ग्लोबल टाइम्स चीनको सरकारी मिडिया हो ।
ग्लोबल टाइम्सको उक्त समाचार रातारात भाइरल बनिसकेको छ । कोरोना भाइरस चीनबाट फैलिएको भनेर चीनको बदनाम गरिएजस्तै हन्तालाई पनि चीनसितै जोडेर हेर्न थालिएको छ । संयोग नै भन्नुपर्छ, जसरी कोरोना सर्वप्रथम चीनको वुहानमा महामारीको रूपमा फैलिएको थियो र पछि विश्वभरि फैलियो, त्यसरी नै हन्ता संक्रमित रोगी चीनमै देखापरेका छन् ।
खासगरी मुसासितको सम्पर्कले फैलिने भनिएको यो भाइरस मानिसबाट मानिसमा नसर्ने भनिएको छ । मुसाको दिसा र पिसाब छोएर आफ्नो मुख, आँखा र नाकमा छोएपछि यो भाइरस मान्छेमा संक्रमण हुने समाचारमा उल्लेख छ । यथार्थमा यो हन्ता भाइरस् सर्वप्रथम चीनमा देखापरेको भने हैन । यो रोगको शिकार कोरियन युद्ध (१९५०–१९५३) कै समयमा अमेरिकी र कोरियाली सैनिकहरू भइसकेका थिए ।
करिब ३ हजार सैनिक यो भाइरसको संक्रमणबाट बिरामी परेका थिए । उनीहरूको मृगौलालाई क्षति पुर्याएको थियो ।
सन् १९९३ मा अमेरिकाको दक्षिणपश्चिमी चार राज्यहरूमा फैलियो । त्यसपछि यो भाइरस मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका,क्यानाडा, युरोपको जर्मनीमा, रूस, अस्ट्रेलिया, अफ्रिकाका केही शहर, अर्जेन्टिना, चिली, ब्राजिल,पनामामा पनि देखा परिसकेको छ । स्मरणीय छ, हन्ता कोरियाको एउटा नदीको नाउँ हो । सोही नदीको नाउँबाट सो भाइरसको नामकरण गरिएको थियो ।
यसबीच, नेपालमा पनि कोरोना ३ जनामा देखापरेको छ । विश्वको १ सय ९६ मुलुक यो भाइरसको चपेटामा परिसकेका छन् । ३ लाख ७५ हजार ५ सय संक्रमित संख्या पुगेको छ । मृत्यु हुनेको संख्या १६ हजार ३ सय ६२ छ । इटलीमा सबैभन्दा बढी ६ हजार ८ सय २० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । दोश्रोमा चीन छ । चीनमा ३ हजार २ सय ८१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अमेरिकामा कोरोनाले ७ सय ८२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । चीनमा सबैभन्दा बढी ८१ हजार २ सय १८ जना यो भाइरसबाट संक्रमित भएका थिए तर चीनले तीमध्येका ७३ हजार ६ सय् ५० जनालाई निको पारेर घर पठाइसकेको छ । उपचार सफल पार्नेमा चीन अग्रपंक्तिमा छ ।